न्याय सेवाकी अधिकृत मञ्जु पोखरेलसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलले के भने ? - Globe Nepal
न्याय सेवाकी अधिकृत मञ्जु पोखरेलसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलले के भने ?
ग्लोब नेपाल	सोमबार, २५ आश्विन २०७८ गते २१:५१ मा प्रकाशित
काठमाडौं । हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेल वैवाहिक जीवनमा बाँधिएका छन् । उनले मञ्जु पोखरेलसँग सोमबार बिहे गरेका हुन् । पोखरेल नेपाल सरकारको न्याय सेवाकी अधिकृत हुन् । मनोजको यो दोस्रो बिहे हो । उनको चार वर्षअघि मिना ढकालसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो ।
कलाकार गजुरेल र पोखरेलले भक्तपुरको डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा बिहे गरेका हुन् । मन्दिरमा बिहे गरेपछि कौशलटारस्थित मानव सेवाआश्रममा रहेका वृद्धवृद्धालाई उनीहरूले खाना खुवाएका थिए । गजुरेलले आफ्नो बिहेका विषयमा नकारात्मक कमेन्ट नगरिदिन आग्रह गरेका छन् । आफ्ना सन्तानको सहमति र सुझावका आधारमा दोस्रो बिहे गरेको उनले बताएका छन् ।
विवाहपछि हाँस्य कलाकार मनोज गजुरेलले के भने ?
अन्त्यमा, पुनः सम्पुर्णं आफन्त, साथी तथा शुभचिन्तकहरुलाई यो सुखद जानकारी गराउछौँ कि हामीले आज मिति २०७८ साल असोज २५ गते सोमबार बिहान डोलेश्वर महादेवकाे दर्शन गर्यौँ । त्यसपछि परिवारको उपस्थितिमा त्यहीँ विवाह सम्पन्न गर्यौँ । अनि, सपरिवार मानवसेवा आश्रम (कौशलटार)मा रहेका बुवाआमालाई खाना खुवाएर/खाएर विवाह सम्पन्न गरेकाछौँ । परिस्थिति सिर्जित हाम्रो यो नयाँ अध्यायलाई शुभकामना र आशिर्वाद प्रदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद !
बाढीपहिरो पीडितलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन राहत प्याकेज घोषणा हुन्छः प्रधानमन्त्री देउवा
अपडेट बेमौसमको वर्षा: अहिलेसम्म ८८ को मृत्यु पुष्टि, ३० बेपत्ता
सरकारका सय दिन : खोपको उपलब्धता र स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा
बर्षाका कारण झापामा ३६१ परिवार विस्थापित